कल्पना गर्न सक्नु हुन्छ ? यसरी पत्ता लाग्यो ब्रम्हाण्डमा ताराहरुको संख्या « Today Khabar
कल्पना गर्न सक्नु हुन्छ ? यसरी पत्ता लाग्यो ब्रम्हाण्डमा ताराहरुको संख्या
प्रकाशित १० श्रावण २०७५, बिहीबार १२:५९
काठमान्डौँ , १० साउन। वैज्ञानिकहरुका अनुसार पृथ्वीमा जति समुद्री तट छन् र त्यसमा बालुवाका कण छन्, त्यति नै संख्यामा ब्रम्हाण्डमा तारा छन् ।अमेरिकी खगोलविद् कार्ल सगनले पछिल्लोपटक यस्तो दाबी गरेका छन् । एक टेलिभिजन शोमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।